Na-egosi izipu site na Disemba, 2019
Rokytnice nad Jizerou, Lysa hora, Ugwu Oke
Ọrụ Giant Mountains na-arụ ugbu a
Gkwanye ihe osise esere ese nke eserese ekwentị pensụl
Ihe onyonyo eserese eserese eserese ekwentị ekwentị na-eji nbudata na ojiji n'efu.
Nwatakiri ihe eserese nke nwere akwụkwọ akụkọ
Nwa agbọghọ na-eme ihe nkiri na nbudata akwụkwọ akụkọ na iji ya n'efu.
Animation ụgbọ ala akụkọ ihe mere eme
Anakpo ụgbọ ala akụkọ ihe mere eme na nbudata n'efu.
Nwa agbọghọ na-eji violin eme ihe atụ
Nwa agbọghọ nwere violin eserese eserese na iji n'efu.
Greta Thunberg, n'abughi aha zuru oke Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg (* Jenụwarị 3, 2003, Stockholm), bụ onye Sweden na-akwado ihu igwe. O meela ka amara nke ọma na ihe omume na-aga n'ihu iji kwado mmemme ozugbo megide okpomoku zuru ụwa ọnụ malitere na 2018 mgbe ọ dị afọ 15.
Thunberg nyere ngagharị nke ụbọchị Fraịde maka Ọha ga-amalite na Nọvemba 2018. Ihe omume ya bidoro n'ọnwa Ọgọstị 2018 tupu ndị Sweden Riksdag (Omeiwu) na Stockholm n'okpuru njiri mara Skolstrejk för klimatet (mgbada ihu igwe ụlọ akwụkwọ) , nke chọrọ ịdọrọ uche ndị ọzọ na nsogbu nke mgbanwe ihu igwe. Agbanyeghị na Sweden n'onwe ya anabatala "iwu kachasị n'okirikiri ihu igwe n'ụwa" dị ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo si kwuo, na-ekwu na mba ahụ ga-anọpụ iche carbon site na 2045, ọ kọwapụtara na mba bara ụba dịka Sweden nwere ike ime ihe karịa ichebe ihu igwe.
N'ime mmeghe nke Greta Thunberg, zuru ụwa…